Heshiiskii ay soo saareen issimadii dhex-dhaadinta ka waday dhacdadii Galkacyo oo maanta la kala saxiixday, loona sameeyey xaflad markhaati-galin ah. – Radio Daljir
Heshiiskii ay soo saareen issimadii dhex-dhaadinta ka waday dhacdadii Galkacyo oo maanta la kala saxiixday, loona sameeyey xaflad markhaati-galin ah.
Galkacyo, Sept 27 ? Xaflad ballaaran oo lagu soo gunaanadayey xalkii nabadeed laga gaaray xurgofo-colaadeedkii Galkacyo ka dhacay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galkacyo gaar ahaanna hotelka lagu magacaabo Golden-balance.
Xafladdaan oo ahayd mid aad u mug-weyn laguna soo gabagabaynayey is-maadhaafkii iyo mushkiladdii colaadeed ee Galkacyo, ayaa waxaa gogosha kama dambaysta ah ee maanta la iskugu yimid dhigay Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo ka mid ah salaadiinta dhaqan ee sida aadka ah looga taxgaliyo deegaannada Puntland.
Munaasabadda maanta ee lagu maamuusayey sida looga gun-gaaray, guntin adagna loogu xiray dhibaatadii Galkacyo ka dhacday ayaa waxaa ka soo qayb-galay issimadii iyo indheergadkii muddada ku hawlanaa xal-u-helidd arrintaasi, mas?uuliyiin ka tirsan dawladda, waftigii dawladda federaalka ee xaaladdaas awgeed u yimid Galkacyo iyo waxgarad kala duwan oo ka socday qaybaha bulsho ee gobolka Mudug.
Shirka gunaanadka ee maanta ayaa lagu soo bandhigay heshiiskii tabanka qodob ka koobnaa ee ay dhawaan soo bandhigeen issimadii dhex-dhexaadka ahaa ee muddada dhiraan-dhirinta uga jiray dhibaatadii Galkacyo ka dhacday iyo dhinacyadii ay dhex-martay, heshiiskaasi oo maanta si rasmi ah loo kala saxiixday.
Qodobada heshiiskaan oo muujinayey arrimo badan oo la xiriiray xaaladihii kala duwanaa, ayna ugu muhiimsanayd nabadda iyo xalka u helka xaalka amni ee gobolka Mudug oo muddo dheer ahaa mid aan cago badan ku taagnayn, ayaa si siman loogu wada-qancay, loona qaatay sidii ay issimadu u soo dhigeen.
Dhammaan madaxdii dawladda Puntland iyo kuwii federaalka iyo sidoo kale issimadii iyo indheergadkii goob-jooga ka ahaa xafladda gunaanadka dhibkii Galkacyo, ayaa markii la saxiixay heshiiskii is-fahamka ahaa isku-gacan-qaaday, si kal iyo laab ahna xabadka isku-saaray taasoo muujinaysa sida looga xumaa xurguftii colaadeed ee dhacday, looguna farxaysan yahay xalka kama dambaysta ah ee laga gaaray.
Munaasabadda maanta ayaa laga jeediyey khudbado taariikhi oo si durugsan u taabanaya damiirka iyo dareenka qofkasta oo leh danqasho bini?aadanimo, kuwaasi oo dhammaantood ku qotamay nabadda, wada-noolaanshaha, is-kaashiga iyo miisaanka uu leeyahay is-fahamka bulshadu, waxaana sidoo kale si aad ah la isku-tusameeyey cawaaqibka laga dhaxlo dhibka colaadda iyo dhiigga islaamka.
Sikastaba ka ahaatee arrinta maanta ayaa ahayd mid muujinaysa sida is-fahamka buuxa looga gaaray dhibaato colaadeed la kawsatay dhalashii bishaan September, sababtayna dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba, taasoo ka dhacday magaalada Galkacyo.